Onye na-eme ngwaahịa na onye na-ebunye Oké Osimiri | N'oge
Olee otu nhota na mkpọ ọrụ enyere ndị ahịa aka? Anyị na-enye ọrụ ngwugwu zuru ezu iji mezuo mkpa azụmahịa gị! 99.6% buru oke ọnụego zuru ezu jikọtara na weebụsaịtị gị wee ree ...
Olee otu nhota na mkpọ ọrụ enyere ndị ahịa aka?
Anyị na-enye ọrụ ngwugwu zuru ezu iji mezuo mkpa azụmahịa gị!
99.6% buru oke ọnụego
Ejikọtara ya na ebe nrụọrụ weebụ gị na ire ere
Akpaghị aka ngwaahịa akara mmelite
Ọrụ otu ụbọchị ahụ
Akpadoro ndị ọkachamara
Enwere nhọrọ ole na ole dịịrị gị gbasara otu anyị si enweta iwu gị maka nhazi.
Nhọrọ kachasị amasị maka ọtụtụ ndị ahịa anyị bụ ikwe ka njikọta nke API nke Warehouse Management System (WMS) na nyiwe ire ahịa ha na-eji ntụgharị Shopify, Amazon, Magento, WooCommerce wdg. ziga.
Anyị bụ ndị mpako nke anyị nso zuru okè buru ziri ezi ọnụego. Anyị na-eji teknụzụ barcode iji bulie iwu na ndị otu anyị na-enweta ọzụzụ zuru oke na iwu na-enyocha mgbe niile tupu mbupu.
Anyị na-ebupụta ọtụtụ nhọrọ nke ihe nkwakọ ngwaahịa gụnyere igbe dị iche iche, envelopes padded afụchi na ndị na-echebe nkuku. Ndị otu anyị nwere ọtụtụ ahụmịhe na-egosi na ngwongwo niile ezitere na-agbakọ, dabara adaba na ozi ụlọ ọrụ gị yana ihe mgbakwunye / ntinye ahịa ndị ọzọ gụnyere.
Also na-nnọọ na-enye gị onwe gị nkwakọ, ma ọ bụ na anyị nwere ike inyere gị aka ime ka gị onwe gị eke nkwakọ na China dị ka gị chọrọ.
Offọdụ n'ime ndị ahịa anyị na-etinye aka na ire ere ahịa nke ngwaahịa ha na ahịa Amazon FBA. Anyị nwere ahụmahụ na mbukota nke mbuaha nnukwu iwu.
Ndị otu ụlọ nkwakọba ihe anyị nwere nka na ịmezu mbupu na Centre Amazon FBA na iji ihe ọmụma na ahụmịhe ha nwere ike ịnye gị ụzọ nkesa dị oke ọnụ ma dịkwa mfe.
Mgbe ndị ahịa chọrọ ọtụtụ ihe dị iche iche (SKU) ka a na-ebufe ọnụ, anyị nwere ike ịhazi iwu ndị a n'ụzọ ziri ezi ma zie ezi ma tụọ usoro mbupu kachasị dị irè na mba ọ bụla na-aga.
Gbọ mmiri n'otu ụbọchị
Iburu oge na izipụ ihe dị mkpa maka azụmahịa e-commerce. Anyị nwere ike iburu, buru ma bufee iwu niile ị natara tupu elekere 4:00 nke mgbede Beijing oge n'otu ụbọchị, ka inwee ike ibupu ha n'ụwa niile site na ọdụ ụgbọ mmiri ị họọrọ.
Nke a nwekwara ike ịba uru dị ukwuu na mmezu nke nnukwu mkpọsa a na-enweta ego, ebe iwu gị niile kwesịrị ka ezipụ ngwa ngwa. Anyị nwere ahụmịhe na-arụ ọrụ na mkpọsa Kickstarter na Indiegogo na-ewepụta nsonaazụ kacha mma maka ndị ahịa anyị na ndị na-akwado ha.
Nke gara aga: Elinyefe Railway
Osote: Ibu Ikuku
Onye na-ebufe Ọrụ FedEx Site na China gaa na Ex Ex Sh ...